Chillers Nsukka - China Chillers Factory & Suppliers
LHVE usoro na-adịgide adịgide Igwe Ọdụdọ Synchronous Frequency Nchigharị ịghasa Chiller
A na-eji PMSM nwere ike dị elu na ọsọ ọsọ nke ụwa maka chiller centrifugal a. Ike ya dị elu karịa 400 kW na ntụgharị ọsọ ya karịrị 18000 rpm. Igwe ọkụ dị elu karịa 96% na 97.5% ruo na nke kachasị, dị elu karịa ogo 1 mba na arụmọrụ moto. Ọ bụ kọmpat na fechaa. PMSM 400kW dị ọsọ ọsọ dị otu ihe dị ka ihe ntinye 75kW AC. Site n'ịkpa gburugburu refrigerant ịgba jụrụ technology ka ...
Ọ bụ ụdị mmiri-mma ịghasa chiller na idei mmiri ịghasa Compressor na ike ga-ejikọrọ na ụdị nile nke ofufe eriri igwe unit ịghọta jụrụ maka nnukwu obodo ma ọ bụ ulo oru ụlọ ọrụ. 1.Precision mmiri okpomọkụ akara ekele stepless ikike ukpụhọde si 25% ~ 100%. (Otu comp.) Ma ọ bụ 12.5% ​​~ 100% (sọrọ comp.). 2.Higher okpomọkụ mgbanwe arụmọrụ ekele idei mmiri evaporating usoro. 3. Higher arụmọrụ n'okpuru ele mmadụ anya n'ihu ibu ekele paralleling ọrụ imewe. 4. High pụrụ ịdabere mmanụ re ...